अधिकतम नाफा एल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारण कसरी प्रयोग गर्ने Martech Zone
शुक्रबार, फेब्रुअरी 12, 2016 शुक्रबार, फेब्रुअरी 12, 2016 Douglas Karr
एक निजी लेबल विक्रेता को रूप मा, तपाइँको लक्ष्य तपाइँको निजी लेबल उत्पादनहरु मा नाफा अधिकतम गर्नु हो। मूल्य निर्धारण तपाईको सकल नाफालाई प्रभावित गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो - र यसैले तपाईंको पूरा ध्यान आवश्यक पर्दछ। तर कसरी पक्का हुन सक्नुहुन्छ तपाईं आफ्नो निजी लेबल उत्पादनहरू एकदम कम मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्न?
तपाईं टेबलमा पैसा छोड्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई थाहा छैन। वा हुनसक्छ तपाई मूल्य निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई जस्तो धेरै बिक्री उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न। जबकि निजी लेबल पक्कै पनि आजको प्रतिस्पर्धी अनलाइन रिटेल संसारमा तपाईंको व्यवसायलाई बढाउने माध्यम हो, प्रतिस्पर्धाको अगाडि रहनु तपाईंको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ।
फिडवाइजरको निजी लेबल मूल्य निर्धारण विशेष रूपमा निजी लेबल विक्रेताहरूको लागि डिजाइन गरिएको छ - जस्तो तपाईं। हाम्रो स्वत: आत्म-सीखने एल्गोरिदमले तपाईको निजी लेबल उत्पादनहरूको लागि तपाईको नाफा मार्जिन अधिकतम गर्न मद्दत गर्दछ, अन्तत: तपाईको निजी लेबल व्यवसाय बृद्धि।
किन तपाईंलाई तपाईंको निजी लेबल उत्पादनहरूको लागि एल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारण आवश्यक छ
इष्टतम मुनाफा - तपाईंले आफ्नो मूल्य अब अनुमान गर्न आवश्यक छैन। एल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारणले तपाइँको प्रत्येक निजी लेबल उत्पादनहरूका लागि अधिकतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सटीक मूल्य पत्ता लगाएर टेबलमा पैसा छोड्ने जोखिमलाई हटाउँछ।
समय बचत - तपाईंले मैन्युअल रूपमा अब आफ्नो मूल्यहरू सेट अप गर्नुपर्दैन। तपाईंको प्रत्येक उत्पादनको लागि मूल्य निर्धारण अत्यधिक समय खपत हुने छ, र तपाईंको दिनको घण्टा लिन सक्दछ। अहिले सम्म, कुनै मूल्य निर्धारण समाधान निजी लेबल उत्पादनहरूको लागि अवस्थित छैन। हाम्रो स्वचालित समाधानले तपाईको समयलाई स्वतन्त्र बनाउँछ ताकि तपाईले आफ्नो निजी लेबल व्यवसाय विकासको गति बढाउनको लागि पुनःपूर्ति, स्काउटिंग र अन्य महत्वपूर्ण गतिविधिहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
नियन्त्रण र स्थिरता - तपाईं आफ्नो सूची र बजार मा नियन्त्रण छ।
अप्रत्याशित अमेजन विक्रेता स्पेसमा - तपाईको अनौंठो व्यापार स्थितिको आधारमा तपाईको उत्पादनहरू कत्तिको चाँडो वा सुस्त बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेमा तपाईसँग पूर्ण नियन्त्रण छ।
एल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारणले कसरी काम गर्दछ?
त्यहाँ कुनै नियम इनपुट गर्न वा कुनै सन्दर्भ उत्पादनहरू पहिचान गर्न आवश्यक पर्दैन। हाम्रो सेल्फ-लर्निंग एल्गोरिदमले चाँडै नै तपाईंको छत मूल्य र फ्लोर प्राइस प्रविष्ट गर्‍यो, र बाँकी सबै स्वचालित हुन्छ।
तपाई कि त एक निर्धारित मिति बाहिर स्टॉक को मिति सेट गर्न वा हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि कति दिन आईटम तपाई दिन बेच्न चाहानुहुन्छ।
मिति बाहिर स्टॉक को मिति - हामीलाई भन्नुहोस् तपाईंको लक्षित मिति बाहिरको मिति, र हाम्रो एल्गोरिदमले इष्टतम मूल्य र बिक्री गति परिभाषित गर्दछ कि तपाईं मितिमा बेच्न निश्चित गर्नुहुन्छ।
[बक्स प्रकार = "नोट" align = "aligncenter" वर्ग = "" चौड़ाई = "% ०%"]उदाहरण: यदि तपाइँ अर्को महिनाको पहिलो दिनमा तपाइँको निर्माताबाट नयाँ स्टक प्राप्त गर्ने कारण हुनु भएको छ र त्यतिबेला सम्म तपाइँको हालको स्टकबाट छुटकारा पाउन आवश्यक छ भने, हामीलाई ठीक मिति बताउनुहोस् र हामी तपाइँको सबै स्टक उत्तम रूपमा खाली भएको सुनिश्चित गर्नेछौं। सम्भावित मूल्य, नयाँ स्टक आउनु भन्दा पहिले। [/ बक्स]
वेग द्वारा लक्ष्य - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई एकदम छिटो बेच्नुहुन्न वा ढिलो चलिरहेको सूचीको साथ अडिनुभयो। हामीलाई भन्नुहोस् कति दिन प्रति दिन तपाईले बेच्न चाहानुहुन्छ, र हाम्रो एल्गोरिदमले बाँकीको हेरचाह गर्न दिनुहोस्।
[बक्स प्रकार = "नोट" संरेखित = "aligncenter" वर्ग = "" चौडाई = "% ०%"] उदाहरण: बजार माग बढेको छ र तपाईंले योजना बनाउनु भएको भन्दा बढी वस्तुहरू बेच्दै हुनुहुन्छ। यस दरमा, तपाई एक हप्तामा बेच्नुहुनेछ तर तपाईको नयाँ स्टक दुई हप्ताको समयमै आउँदैछ। तपाइँ नयाँ आपूर्तिमा नआउन्जेल तपाईले बेच्नुहुन्न भनेर निश्चित गरेर तपाइँको पृष्ठ श्रेणी गुमाउने बेवास्ता गर्नुहोस्। तपाईको बिक्रीको गति नियन्त्रण गर्नुहोस् हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाई कतिवटा वस्तुहरू बेच्न चाहानुहुन्छ। [/ बक्स]
थप फीडवाइजर बेनिफिटहरू
को भागको रूपमा फिडभाइजर निजी लेबल प्याकेज, तपाईं पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ:
हाम्रो व्यापार खुफिया सूट - सहज ड्यासबोर्ड, गहन रिपोर्ट र दैनिक सचेतहरू समावेश गरी तपाईलाई सच्चा ब्यापार निर्णय लिन मद्दत पुर्‍याउँछ:
ड्यासबोर्ड दुबै Panoramic सिंहावलोकन र गहिरो गोता क्षमता प्रदान गर्दछ, तपाइँलाई तपाइँको लागत, बिक्री, शेयर दर र बजार स्थिति को एक राम्रो विश्लेषण प्रदान गर्दछ।
हाम्रो रिपोर्टहरू डाटाको एक समृद्ध सेट हाइलाइट गर्नुहोस् जुन तपाईं विभिन्न प्यारामिटरको अनुसार टुक्रा र पासा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको व्यापार आवश्यकताहरू अनुरूप।
सतर्कताहरू महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई हाइलाइट गर्नुहोस्, जस्तै जब विशिष्ट वस्तुहरू अब लाभदायक हुँदैनन्, जब तपाईंको बेस्टसेलिंग आइटमहरू भण्डारको बाहिर छन्, र जब तपाईंले ढिलो-गतिशील ईन्भेन्टरी लिक्विडेट गर्नुपर्दछ।
A समर्पित ग्राहक सफलता प्रबन्धक कसले तपाईंलाई तपाइँको निजी लेबल व्यवसाय बढाउन मा मार्गदर्शन गर्दछ। हाम्रो ग्राहक सफलता टोली अमेजन विशेषज्ञहरु र वित्त विशेषज्ञहरु बाट बनेको छ - ताकि तपाई विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ तपाई दाहिने हातमा हुनुहुन्छ।
तपाईंको अमेजन निजी लेबल व्यवसायको लागि फिडभाइजरले के हासिल गर्न सक्छ हेर्नुहोस्!
तपाइँको अमेजन निजी लेबल व्यवसाय को गति प्रदान गर्नुहोस्
टैग: एल्गो-मूल्य निर्धारणएल्गोरिथमिक मूल्य निर्धारणफिडभाइजर
निष्क्रिय सदस्यताका लागि पुन: संलग्नता अभियान कसरी बनाउने